Nhau - Exhibition yakakosha kwazvo kukambani yedu
Exhibition kunokosha chaizvo kuti company.We edu kuratidza pashoo gore.Here mumwe kuratidzwa kuti takabatana.
Tiri paBatimat muna 4 ~ 8, Mbudzi, 2019
BATIMAT, inoratidzira zvivakwa makore maviri muParis, France, yakarongeka neReed Exhibitions Group, iyo yakabudirira kuita makumi matatu kuratidzira kubva 1959.
Panguva imwecheteyo, Interclima + Elec, iyo International Exhibition yekupisa, firiji, kutonhodza mweya, Nyowani Nyowani uye Imba magetsi, uye Ideo Bain, iyo International Exhibition yePombi dzemvura neHutsanana muParis, France, vaunza pamwechete rese indasitiri yekuvaka uye kugadzira chiitiko chikuru kwazvo chekuvaka panguva imwe chete.
Seyakasarudzika chikuva, Batimat inoratidzira huwandu hwakawanda hwezvinhu, zvishandiso, matekinoroji maturusi, mhinduro uye masevhisi.Yese indasitiri inogona kusangana nezvinodiwa paBatimat.
Chiratidziro chinounza mikana yakakosha yekuti varatidziri vataure nenhamba huru yevatengi, vawane vangangoita vatengi, varatidze hunyanzvi hwavo uye varatidze zvavakawana zvitsva
BATIMAT inotarisira kuzadzisa zvido zveindasitiri yekuvaka neyekuvaka munzvimbo yakaoma yehupfumi neboka idzva rematumba. Inovavarira kuunza vashanyi vazhinji kune varatidziri, angave makambani makuru kana madiki, kutanga-kumusoro kana mabhizinesi emhuri, uye kukurudzira kusimudzira bhizinesi Chiitiko chepasi rose ichi chinounza mukana mutsva webhizinesi kumaindasitiri akasiyana siyana muFrance nepasirese, kupa akasiyana mashandiro uye nzira dzekutengesa dzemakambani akasiyana.
Kukwezva kwakasimba: Paris, France zvivakwa zvekuratidzira BATIMAT zvakare inopa nzira nyowani yekuratidzira: kune vatengi veVIP uye / kana vateereri sechinangwa, nemari shoma, mhinduro yacho, kukwezva vatengi vazhinji uye / kana vanogona kuve vatengi kune vateereri, kuratidzwa kwemhinduro dzehupfumi uye dzinoshanda dzekuvandudza kuoneka kwechigadzirwa, kukurira dambudziko rehupfumi pamwe nemhinduro yekusimudzira kukura kwehupfumi, mikana yakawanda yekutengesa.
Muchiratidziro ichi, takasangana neshamwari dzekare uye kuita shamwari itsva.Tinounza zvigadzirwa zvedu zvemhando yepamusoro kuratidza.Zvizhinji zvezvigadzirwa zvedu zvinogamuchirwa muchiratidziro ichi .Tariro yekusangana newe mune inotevera kuratidza.